आइएफए २०१:: घटनाको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा Androidsis
वर्षभरि त्यहाँ दुई प्रमुख घटनाहरू छन् जसमा धेरै मानिसहरू उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दछन्, विशेष गरी स्मार्टफोन। फेब्रुअरी मा हामी बार्सिलोना मा आयोजित MWC, भेट्छौं। थप रूपमा, हामीसंग आईएफए छ, जुन बर्लिनमा अगस्टको अन्त्यमा वा सेप्टेम्बरको सुरूमा हुन्छ। यो बर्षको संस्करणआइएफए २०१ 2019 नजिकै आउँदैछ र हामीलाई केहि विवरणहरू पहिले नै थाहा छ।
आइएफए २०१ about को बारेमा हामीले जान्नुपर्ने सबै कुरा हामी तपाईंलाई बताउँछौं। विशेष गरी अब अधिक र अधिक ब्रान्डले बर्लिनमा भएको कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्छ, ताकि हामी तपाईंको बारेमा हामीले आशा गर्न सक्ने केही समाचारहरू पहिले नै थाहा पाइसकेका छन र यस घटनाले हामीलाई छोड्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
1 आईएफए २०१ 2019 कहिले आयोजित गरिन्छ?
2 कसरी जाने
3 हामी के आशा गर्न सक्छौं?
आईएफए २०१ 2019 कहिले आयोजित गरिन्छ?
यो घटना प्राय: अगस्तको अन्त्य र सेप्टेम्बरको सुरू बीचमा हुन्छ। यद्यपि यस बर्षको संस्करण सामान्य भन्दा केहि पछि आयो। आईएफए २०१ 2019 सेप्टेम्बर on देखि सुरु हुनेछ, र यो एकै महिनाको ११ तारिखसम्म विस्तार हुन्छ। यद्यपि घटना सुरू हुनुभन्दा केही दिन पहिले नै ब्रान्ड घटनाहरू हुन्छन्, MWC २०१ in मा देखा पर्दछ। त्यसैले हामी घटना सुरु हुनुभन्दा दुई दिन पहिले नै समाचारको आशा गर्न सक्छौं।
ती दिनहरूमा जुन यो मनाइन्छ, यो १०:०० र १:10:०० बिच खुला रहनेछ। ताकि यो घण्टा मा भेट्न सकिन्छ। यद्यपि यो याद राख्नुपर्दछ कि यो एक ठूलो घेरा हो, १ 00०,००० m² भन्दा बढीको साथ। तसर्थ, तपाईंले धेरै हिड्नुपर्नेछ र राम्रो छ ती ब्रान्डहरू वा प्रस्तुतीकरणहरूको स्थान थाहा पाउन जुन तपाईं जानु चाहानुहुन्छ।
यदि तपाईं आईएफए २०१ attend मा भाग लिन चाहानुहुन्छ, किनकि तपाईं ती मितिहरूमा शहरमा हुनुहुन्छ वा किनभने तपाईं यो घटना पहिलो पटक अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, तिनीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको आधिकारिक वेबसाइट। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामी यस सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका टिकटहरू फेला पार्छौं, त्यसैले तपाईंलाई एउटा उपयुक्त छनौट गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। चासो को विवरण को एक छ कि मूल्यहरु प्राय: धेरै किफायती हुन्छन्.
त्यसो हो रुचि छ जो कोही धेरै समस्या बिना आईएफए २०१० भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहोस्। टिकटहरू यसको आधिकारिक वेबसाइटमा सिधा खरीद गरिन्छ, त्यसैले तपाईंले केवल यसमा सूचित चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि जटिल छैन।
आइएफए २०१ 2019 यो घटना हो जुन एन्ड्रोइडका धेरै ब्रान्डहरूले हामीलाई समाचारहरू छोड्नका लागि छान्छन्। घटना हप्ताको यी हप्ताहरूमा, तिनीहरू मध्ये धेरैले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्दछ। वास्तवमा, गत हप्ता तिनीहरू पहिले नै भइसकेका छन् पुष्टि गरिसकेका दुई कम्पनीहरू तिनीहरू जर्मन राजधानीमा कार्यक्रम मा नयाँ फोन प्रस्तुत गर्न जाँदैछन्।
आईजीए २०१ 2019 मा यसको उपस्थिति पुष्टि गर्ने एलजी पहिलो हुन्। कोरियाली निर्माता एक डुअल स्क्रीन फोन प्रस्तुत गर्दछ, जुन V60 ThinQ हुन अफवाह छ। थपमा हामी यस फोनको लागि अर्को फोन देख्न सक्दछौं, LG G8X ThinQ, जसको केही थाहा थिएन, तर जसको डिजाइन यो गत साताको अन्त्यमा लीक भयो। त्यसकारण यस प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा तपाईंको अंशको लागि कम्तिमा दुई फोनहरू।
नोकिया अन्य ब्रान्ड हो जसले यो पुष्टि गर्‍यो कि यो आईएफए २०१ 2019 मा हुनेछ। ब्रान्ड यस घटनालाई जर्मन राजधानीमा पहिलो पटक भाग लिन्छ, त्यसैले यो प्रयोगकर्ताहरू बीच चासो जगाउन डिजाइन गरिएको एउटा प्रस्तुतिकरण हो। अहिले कुन फोनले हामीलाई छोड्नेछ भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन, यद्यपि अनुमान गरिएको छ यो नोकिया .7.2.२, नोकिया .6.2.२ र नोकिया .5.2.२ हुनेछ। न त यो हामीले बिर्सनु पर्छ कि उनीहरूले आफ्नो उच्च अन्तको नयाँ संस्करणमा काम गरिरहेका छन्, त्यसैले यो अर्को फोन हुन सक्छ जुन उनीहरू घटनामा प्रस्तुत गर्दछन्। जे भए पनि, तिनीहरू यसमा मुख्य आकर्षणहरू मध्ये एक हुनेछन्।
सम्भवतः यी हप्ताहरू थप ब्रान्डहरू थपिनेछ, बर्लिनमा तिनीहरूको उपस्थिति पुष्टि गर्दै। हामी यस आईएफए २०१ 2019 बाट हामीले आशा गर्न सक्ने कुरामा सावधान हुनेछौं, जसले हामीलाई धेरै समाचारहरू छोड्ने आश्वासन दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » आइएफए २०१ 2019: हामीलाई अहिलेसम्म के जान्नु आवश्यक छ
Looxie साथ लिनको लागि संसारका कोहीबाट पनि फोटाहरू अनुरोध गर्नुहोस्